6:25 pm, बिहीबार, साउन ७, २०७८
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत इलेक्ट्रीक साधनमा लाग्दै आएको कर घटेसँगै धेरै सवारी साधन किन्न चाहने मानिसहरुको बीचमा नयाँ इनर्जी भेहिकलको चर्चा सुरु भएको छ ।
करका दरमा परिमार्जनसँगै चिनियाँ ब्राण्ड दिगो, डेरी, हुवावे, साइटेक जस्ता ब्राण्डले आफ्ना उत्पादन विक्री गर्दै आएका छन् । यी मध्ये केही ब्राण्ड नेपाल आउने क्रममा रहेका छन् । त्यसैगरी, बजारमा स्थापीत ब्राण्ड किया, हुन्डाई, महिन्द्रा, एमजी र वीवाइडी जस्ता ब्राण्डले आफ्ना उत्पादन विक्री गरिरहेका छन् । टाटा र निसान जस्ता कम्पनीले पनि इलेक्ट्रीक गाडी विक्री सुरु गर्न लागेका छन् ।
इभी किन्ने मानिसलाई छनोट बढेसँगै ग्राहकको मुख्य चासो यी गाडीमा प्रयोग हुने व्याट्री र त्यसले एकपटकको फुल चार्जमा दिने रेन्ज हुने गरेको छ ।
हुनत इलेक्ट्रीक गाडी व्याट्रीको साइज अनुसार नै फरक मूल्य हुने गर्छ । तर, धेरै ग्राहकहरुले आफ्नो आवश्यक्ता भन्दा धेरै रेञ्ज दिने गाडी खोजिरहेका हुन्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै चलाउने मानिसलाई १५० देखि २०० किलोमिटर रेञ्ज दिने गाडी उपयुक्त हुन्छ ।
बजारमा उपलब्ध सबै इभीहरु लिथियम आयोन टेक्नलोजीमा आधारित रहेको छन् । यदा कदा सस्ता खालका लिड एसिड व्याट्री प्रयोग भएका स्कुटर तथा साना कारहरु पनि नेपालमा भेट्न सकिन्छ ।
लिथियम आयोन टेक्नलोजीमा इभी कम्पनी अनुसर १ लाख पचास हजार किलोमिटर देखि ५ लाख किलोमिटरसम्म वा आठ वर्षसम्म जुन अगाडि आउँछ त्यो समय वा किलोमिटरको आधारमा व्याट्रीमा वारेन्टी पाइन्छ । साना कारमा भने ४ वर्षको मात्रै वारेन्टी पनि दिएको पाइन्छ ।
इभीमा प्रयोग भएको व्याट्री प्याक परिवर्तन गर्नको लागि गाडीको मूल्यको झण्डै आधा खर्च लाग्ने अवस्था अहिले रहेकाले धेरै ग्राहकमा अन्योलता पाउन सकिन्छ ।
व्याट्रीको मास प्रोडक्सन र नयाँ नयाँ टेक्नलोजीको विकाससँगै मूल्यपनि घट्दै जाने अनुमान गरिएको छ । यसले अहिले इभी किन्ने मानिसले व्याट्री परिवर्तन गर्ने समयसम्म व्याट्रीको मूल्य निकै घट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तर, आठ वर्षको प्रयोगपछि व्याट्रीको रेञ्ज घट्दै जाने निस्चित छ । यस्तोमा आफ्नो इभीमा भएको व्याट्रीको लाइफ बढाउन केही सामान्य तरिका अपनाएर व्याट्रीको लाइफ बढाउन सकिने विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
१. चार्जगर्दा प्रत्येक्ष घामबाट जोगाउने
इभीको व्याट्री चार्ज वा डिस्चार्ज हुँदा त्यसको तापक्रम बढ्दै जान्छ, जसलाई यसमा रहेको थर्मल मेनेजमेन्ट सिस्टमले चिस्याउने काम गर्छ । यदि, गाडीलाई चर्को घाममा पार्क गरेर चार्ज गर्ने हो भने यसको तापक्रम बढ्छ । फलत थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टम एक्टीभेट हुन्छ । थर्मल मेनेजेन्ट संचालन हुनका लागि पनि व्याट्रीको प्रयोग हुने भएकोले सकेसम्म ओजेलमा पार्क गरेर चार्ज गर्नु पर्छ ।
२. धेरै चिसो मौसमा गाडी नराख्ने
नेपालको वातावरण युरोपियन तथा अमेरिकाको जस्तो हिउँ पर्ने तथा कठाङ्ग्रीने हुँदैन । तर पनि काठमाडौं लगायत पहाडी क्षेत्रमा पुष माघमा सुन्य वा त्योभन्दा पनि चिसो हुने गर्छ । धेरै तातो जस्तै धेरै चिसो मौसममा पनि थर्मल मेनेजमेन्ट सिस्टमले काम गर्ने भएकोले धेरै चिसो वातावरणमा पनि गाडी राख्ने र चार्ज गर्ने गर्नु हुँदैन ।
३. सकभर फास्ट चार्जिङको प्रयोग नगर्ने
इभीमा फास्ट चार्जिङ सिस्टम एक क्रान्तिकारी खोज हो । यस प्रविधिले ३० देखि ४५ मिनेटमा गाडीको व्याट्री ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्छ । यसले इभी चालकको समय धेरै नै बचाउने भएपनि व्याट्री लाइफ भने घटाउँछ । त्यसकारण अति आवस्यक पर्दा वाहेक फास्ट चार्जिङ गर्नु राम्रो मानिदैन ।
४. व्याट्री चार्जको स्थिती सुन्य वा १०० प्रतिशत नगर्ने
लिथियम आयोन व्याट्रीको चार्जिङ पोजीशन सधैँ बीचमा रहनेगरि गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार गाडीको व्याट्रीलाई सुन्य प्रतिशत डिस्चार्ज वा शतप्रतिशत चार्ज गर्नु हुँदैन । सकभर व्याट्री २० प्रतिशतमा आएपछि रिचार्ज गर्ने तथा ८० प्रतिशत पुगेपछि चार्जबाट छुटाउने गर्नु पर्छ ।
५. छिटोछिटो चार्ज नगर्ने
रिचार्जेवल व्याट्रीको चार्जिङ साइकल हुने भएकोले लिथिएम आयोन व्याट्रीलाई छिटो छिटो चार्ज गर्नु हुँदैन । चार्जिङ साइकल वरावर व्याट्रीको लाइफ हुने भएकोले यसलाई सकेसम्म जोगाउनु पर्छ । जस्तो केही किलोमिटर गुढाएर व्याट्रीको चार्ज १० वा २० प्रतिशत घट्यो भन्दैमा रिचार्ज गरिहाल्नु हुँदैन । इभीको व्याट्रीलाई २० प्रतिशतको हाराहारीमा आएपछि मात्र रिचार्ज गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनकी २० प्रतिशतमा आएपछि रिचार्ज गर्नु र ९० प्रतिशत चार्ज गरेपनि एक चार्जिङ साइकल नै खर्च हुने हो ।
यी माथिका बाहेक व्याट्रीको लाइफ बढाउनका लागि लामो समय पार्क गर्दा ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र व्याट्रीको रिचार्ज राख्नु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै इभी चालकको ड्राइभिङ ह्यावीटले पनि व्याट्रीको रेञ्ज र लाइफ दुबैमा फरक पार्छ । इभी चलाउँदा लगातार एक्सीलरेशन गर्नु हुँदैन । विस्तारै स्पीड बढाउँदै जाँदा राम्रो हुन्छ । जति छिटो गाडी दौडायो उति धेरै व्याट्री खर्च हुने त हो ।